बन्दरगाह व्यवस्थापनमै रुमलिएको आयात | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बन्दरगाह व्यवस्थापनमै रुमलिएको आयात
लेख | दृष्टिकोण 42 views
बन्दरगाह व्यवस्थापनमै रुमलिएको आयात
नेपालले तेस्रो मुलुकसितको व्यापारमा उपयोग गरिराखेका भारतका तीनओटा बन्दरगाहमा अघिल्लो साता स्थलगत अवलोकनको मौका मिल्यो । पारवहनका अनेक अवरोधले नेपालको वैदेशिक व्यापार तुलनात्मक खर्चिलो हुँदै गएको परिदृश्यमा अहिलेसम्म अधिक उपयोगमा रहेको कोलकाता बन्दरगाहका अव्यवस्थाका आयाम र तुलनात्मक सहज विकल्पको सार्वजनिकीकरण मुख्य अभीष्ट थियो । त्यसक्रममा कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गरिराखेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, आयातकर्ताका प्रतिनिधिलगायत पक्षसित अन्तरसंवाद हुने नै भयो । अयातकर्ताका औसत गुनासा नयाँ थिएनन् ।
२ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको सम्झौता भएसँगै यी बन्दरगाहबीच नेपालको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा पनि शुरू भएको छ । नेपालको कण्टेनर ओसारपसारमा एकाधिकार कायम रहँदासम्म गुनासोसमेत सुन्न नखोज्ने कोलकाता पोर्ट ट्रष्ट अहिले आयातकर्तालाई सहज सेवा र सुविधाका निम्ति अग्रसर देखिनु व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको उपजबाहेक अन्य होइन । तीनओटै बन्दरगाह व्यवस्थापनबीच नेपाली आयातकर्तालाई आफूतिर तान्न तुलनात्मक लाभका फेहरिस्तको प्रस्तुतिमा पनि प्रतिस्पर्धाको भान हुन्छ । यस सन्दर्भमा बन्दरगाह पूर्वाधार, प्रतिस्पर्धा र वैदेशिक व्यापारमा सम्भावित हितका आयामहरू खोतल्नु आलेखको तत्कालीन अभिप्राय हो ।
आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहको साँघुरो पूर्वाधार र जीर्ण प्रविधिले चर्को पारवहन खर्च उठाउनुपरेको बताइराख्दा अझै पनि नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको अधिकांश व्यापार यही बन्दरगाहमा समेटिएको छ । सन् २०१७ मा कोलकाता बन्दरगाहले नेपालका लागि ७२ हजार कण्टेनर ‘हेण्डेलिङ’ गरेको तथ्याङ्क छ । यो परिमाण सन् २०१८ मा ८० हजारको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तुलनात्मक सहज र आधुनिक प्रविधियुक्त मानिएका हल्दिया बन्दरगाहमा ८ सय १५ र विशाखापत्तनम्बाट ३ हजार १ सय ९० कण्टेनरमात्र आएका छन् ।
सन् २०१६ फेब्रुअरीमा विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगमा सम्झौतासँगै आयातकर्ता त्यता जान थालेपछि कोलकाता बन्दरगाह चनाखो देखिएको छ । कोलकाता पोर्ट ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेर पनि निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरिराखेको हल्दिया बन्दरगाहले समेत आयातकर्ता तान्न आकर्षणका उपाय अपनाइराखेकै छ । यसो त, कोलकाता र हल्दिया दुवै नदीको जलाधारमा आधारित बन्दरगाह हुन् । नहरमार्फत पानीजहाज ल्याइने भएकाले यहाँ ‘मदर भेसल्स’ सोझै आउन सक्दैनन् । कोलम्बो र सिङ्गापुरमा कण्टेनर ‘फिडर भेसल्स’मा ‘ट्रान्सिपमेण्ट’ गर्नुपर्छ । यसले पारवहनको लागत बढाइराखेको छ । भारतकै एक दर्जनभन्दा बढी राज्यसहित नेपाल र भुटानका लागि आउने कण्टेनरको चापको तुलनामा साँघुरो यार्ड कोलकाताको अर्को समस्या हो । कोलकाताबाट १ सय ५२ किलोमिटर रेलवे दूरीमा रहेको हल्दियाको कण्टेनर ‘हेण्डेलिङ’ क्षमता समान छ । तर, आधा पनि उपयोग हुन पाएको छैन । कोलकाताको जाम र जरीवानाबाट आजित भएरै पनि आयातकर्ता यो बन्दरगाहको उपयोगमा आवश्यकताजति सचेत देखिएका छन् ।
वीरगञ्जबाट ७ सय किलोमिटर टाढा रहेको कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दूरीमा रहेको विशाखापत्तनम्को विकल्पले आयातकर्तालाई आफूतिर तान्न सकिराखेको छैन । विशाखापत्तनम्मा कोलकाताको तुलनामा रेलमार्गको भाडा केही बढी पर्छ । तर, वस्तुको उत्पादनदेखि गन्तव्यसम्मको लाग्ने खर्च र समयका आधारमा विशखापत्तनम् मितव्ययी हुने देखिन्छ । यो समुद्रसँग जोडिएकाले ‘मदर भेसल्स’को पहुँच सहज छ । ६ हजार ५ सय कण्टेनर बोकेका पानीजहाज सोझै आउन सक्छन् । कोलकाता र हल्दियामा क्रमशः ८ सय र २ हजार कण्टेनर बोकेर साना पानीजहाजमात्र आउन सम्भव छ ।
कोलकाताको तुलनामा विशाखापत्तनम्मा समुद्री भाडामा २ सयदेखि २ सय ५० डलरसम्म र औसत समय ५ दिन बचत हुन्छ । सिपिङ कम्पनीले यो बन्दरगाहमार्फत हुने आयातमा वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । आवश्यकीय कागजातको प्रक्रियामा विलम्ब नभए बन्दरगाहमा आइपुगेका कण्टेनर १० दिनभित्र गन्तव्यमा पु¥याएर फिर्ता गर्न सकिन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनले कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको प्रतिकण्टेनर पारवहन औसत खर्च १ लाख २५ हजार भारतीय रुपया देखाएको छ । विशाखापत्तनम्बाट करीब १ लाख रुपया लाग्छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट सिपिङ कम्पनीले कण्टनेर फिर्ताका लागि १४ देखि २१ दिनसम्म समय दिन्छन् । तर, बन्दरगाह आइपुगेका जहाज १ हप्तासम्म कण्टनेर ‘अनलोड’को पालो पर्खिएर बसेका भेटिन्छन् । अपवादबाहेक सिपिङ कम्पनीले दिएको अधिकांश समय कण्टेनर ‘बर्थिङ’ र रेलको पालो कुर्दा सकिन्छ । भारत सरकारले सञ्चालन गरिराखेको कोलकातामा पोर्टको कागजी प्रक्रियामा ७ गुणासम्म बढी खर्च लागेको भेटिएको छ । हल्दिया र विशाखापत्तनम् निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित भएकाले स्वाभावैले दक्षतामुखी र प्रतिस्पर्धी हुनेमा द्विविधा रहेन ।
स्मरण हुन्छ, नेपाली आयातकर्ताका प्रतिनिधिका रूपमा कोलकातामा कार्यरत कष्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए)सँगको भेटमा उनीहरूले कुराकानीको शुरुआतमै आफ्नाबारेका गुनासाहरूको जानकारी मागेका थिए । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, पारवहनका अधिकांश अव्यवस्थामा सीएचएको प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका जोडिएको छ । कोलकाताका अधिकांश एजेण्ट ढुवानी सञ्चालक छन् । उनीहरू आफ्नो व्यवसाय चलाउन पोर्ट र रेलवेमा कृत्रिम जाम देखाएर आयातकर्तालाई ट्रकबाट ढुवानीका निम्ति दबाब दिन्छन् । कोलकाता पोर्टमा उनीहरूको यस्तो जालो छ, हल्दियामा पुगेका कण्टेनरसमेत कोलकातामै फर्काउने ‘क्षमता’ राख्छन् । आफ्नो गाडीमा कण्टेनर लोड नगरेको झोकमा एजेण्ट एशोसिएशनका पदाधिकारीले लोडिङ नै बन्द गराएका हास्यास्पद कुरासमेत सुन्न पाइयो । आयातकर्ताले पोर्टमा जामको अवस्था हेरेर कोलकाता वा हल्दिया दुवै पोर्टमा मालसमान ल्याउन पाउने नियम भए पनि त्यो कागजमै खुम्चिएको छ ।
कोलकातामा पोर्ट ट्रष्टले ‘ट्राञ्जिट कष्ट’को बिल आयातकर्ताका प्रतिनिधिलाई नदिनु पनि खर्च अभिवृद्धिको एउटा अर्को कारण बनेको छ । सिपिङ कम्पनीमार्फत आउने बिलमा अनावश्यक खर्च जोडिन्छ । अधिकांश सीएचए र सपिङ कम्पनीले नेपालको व्यापारलाई कमाउने औजार बनाएकैले उनीहरू अन्य बन्दरगाहको उपयोगमा अनपेक्षित अवरोध र बखेडाबाजी गर्छन् । यो प्रवृत्तिले रेलवे सेवाप्रदायक भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर)लाई समेत अन्य प्रतस्पर्धी बन्दरगाहमा सेवाको मूल्य बढाउन दबाब दिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । रेलवे सेवा सम्झौतामा कोङ्करको एकाधिकार बेथितिको अर्को कडी हो । स्वयम् कोलकाता पोर्टका अधिकारी नै सीएचए, सिपिङ कम्पनी, ढुवानी व्यवसायी र अनेक आवरणका बिचौलियाको बिगबिगी स्वीकार्छन् ।
आयातकर्ता उल्लिखित अव्यवस्थाबाट अनभिज्ञ छैनन् । जरीवानाको नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइराखेको छ । आयातकर्ताले यस्तै रकमको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा २ वर्षअघि सीएचएले नेपालको लोडिङ नै बन्द गराएका थिए । त्यसताका आयातकर्ताले ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । आयातकर्ता सीएचए र सिपिङ कम्पनीको मनोमानीको आलोचनामा एक कदम अगाडि नै देखिन्छन् । तर, प्रतिस्पर्धी बन्दरगाहतिर किन जाँदैनन् ? उत्तर असहज छैन, व्यापारमा गइराखेको अनपेक्षित खर्चको अग्रभागमा आयातकर्ता देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार उठाउने त आम उपभोक्ता नै हुन् । आयातकर्ताले आफूलाई सापेक्ष अद्यावधिक नगर्नु र प्रतिस्पर्धामा उदासीनताले दलाल मालामाल भइराखेका छन् । यतिसम्म कि, कागजपत्रमा आयातकर्ताका विस्तृत सम्पर्क ठेगानासमेत पाउन सकिन्न । यो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको खराबी पनि हो । मालवस्तुका उत्पादकदेखि समुद्री ढुवानीकर्ता र बन्दरगाहसम्म जेलिएका बिचौलियाको स्वार्थले नेपाली उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ ।
विशाखापत्तनम्मा अहिले पनि १ हजारजति कण्टेनर अड्किएका छन् । एजेण्टलाई बाईपास गरेको यो बन्दरगाहमा कण्टेनर रोकिनुका कारण अरू केही नभएर, ‘पोर्ट क्लियरेन्स’को कागजात बेलैमा पुग्न नसक्नु हो । नेपाली दूतावासले ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ पठाएपछि ‘क्लियरेन्स’को काम हुन्छ । त्यहाँका लागि यो कामको जिम्मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले लिएको छ । कागजात पु¥याउनै डेढ महीनासम्म लाग्छ । कोलकाता महावाणिज्य दूतावासको क्षेत्राधिकार पश्चिम बङ्गालमै सीमित छ । बन्दरगाह उपयोगको सम्झौताको २ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा २ महीनाअघि मात्र विशाखापत्तनम्मा महावाणिज्य दूतावास खोल्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दिल्ली दूतावासले क्षेत्राधिकार नछोड्न बहानाबाजी गरेकाले विलम्ब भएको बुझ्ने सरकारी जानकारहरूको कमी छैन । बल्लतल्ल अघि बढेको प्रक्रिया अझै अनेक अन्तर्य र स्वार्थमा जेलिएकै छ ।
तेस्रो मुलकसँगको व्यापारमा भारतीय बन्दरगाहमाथिको निर्भरता भूराजनीतिक बाध्यता हो । तर, यसको सापेक्ष रूपान्तरणमा रणनीतिक योजनाहरूको अभावलाई यतिखेर विडम्बनाबाहेक अन्य मान्न सकिन्न । वैदेशिक व्यापारको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिराखेको छ । पारवहनका दीर्घकालीन योजना त परको कुरा तत्कालीन असहजता फुकाउनसमेत सरकारी प्रयत्न पर्याप्त देखिन्न । १ हजार किलोमिटरको दूरीको धाम्रा बन्दरगाहमा यतिखेर सरकारी ध्यान तानिएको सुनिएको छ । त्यो पनि सरकारी सक्रियता नभएर बन्दरगाह सञ्चालकको रुचिको उपज हो । विशाखापत्तनम्को प्रक्रियागत पूर्णताका निम्ति ८ वर्ष खर्चिनु परेको दृश्यावलीमा अन्य तुलनात्मक प्रभावकारी र सहज बन्दरगाहको प्राप्तिको पहल प्रायः शून्य छ । बन्दरगाह व्यवस्थापनबीच नेपालको आयातलक्षित अहिलेको प्रतिस्पर्धा वैदेशिक व्यापारलाई मितव्ययी बनाउने उपयुक्त अवसर त हुँदै हो, सम्भावित अन्य बन्दरगाहको विकल्पमा पहल थाल्न विलम्ब गर्ने बेला पनि छैन ।
विनापैसाको चेक : एक अपराध !
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:५४
लाभकर कि कारोबार कर
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०५:४३
आर्थिक रूपान्तरणमा बैङ्किङ क्षेत्र
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०५:४१
बजेटमा पूँजी बजारका लगानीकर्ताको अपेक्षा
६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:३४